Aro lozan’ny fifamoivoizana Hitohy ny fisavana tampoka fiara sy môtô
« Tsy azo lazaina ny daty sy ny toerana fa anaty paik’ady ny fisavana tsy ampoizina fiara sy môtô», hoy ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana.
Fanentanana fifanabeazana fa tsy fanasaziana hatreto no nataon’izy ireo, raha ny fampitam-panazavan’ny polisy eo Tsaralalana. Nandritra ny ora efatra fotsiny teo amin’ny lalam-baovaon’ny faritra 67ha, ny alarobia teo dia nahatratra tsy mpanara-dalana 400 mahery izy ireo. Ny 5 tamin’ireo no tsy nanana fahazoan-dalana hamily. Ny 93 kosa dia lany ny fe-potoanan’ny fiantohana ary ny 306 dia mpitondra môtô tsy nanana aroloha. “Noho ny maha fanentanana sy fanabeazana iadiana amin’ny lozam-pifamoivoizana, nasaina naka “casque” ireo tsy nitondra izany. Ny tsy nanana saram-piantohana kosa nanefa ny azy ka rehefa vita dia samy naka ny fitaovam-pitaterany teo avy izy ireo”, hoy hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana eo Tsaralalana.
Miezaka ny mpitandro filaminana mampanara-dalàna ny olom-pirenena, fa ny olana matetika dia ny kolikoly avo lenta eo anivon’ny saram-piantohana raha misy tokoa ny loza. Matetika very anatin’ny kipitsopitson’ny fitoriana ny zotram-pitakiana.